सुतेका बेलासमेत ‘मलाई नमा’र्नुस्’ भन्दै चि’च्याउँछन् रुकुम घ’टनाका घाइते – Jagaran Nepal
सुतेका बेलासमेत ‘मलाई नमा’र्नुस्’ भन्दै चि’च्याउँछन् रुकुम घ’टनाका घाइते
भेरी नगरपालिका–४ का सुदीप खड्काको शारीरिक चोट विस्तारै ठीक हुँदैछ । टाउको, काँध, हात, पिँडुला, ढाड सबैतिर चोट छ तर त्यो चोट विस्तारै सञ्चो हुँदै गइरहेको छ । बेलाबेला घटनाको पी’डा र त्रा’सले सताइरहेको छ । कहिलेकाहीँ घ’टना सम्झेर उनी झस्किरहेका छन् । भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विकसहित छ जनाको ज्यान जाने गरी गत जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८ सोतीमा भएको घ’टनामा सुदीप घा’इते भएका थिए।
उनीसहित १२ जनाले बल्लतल्ल ज्यान जोगाउन सफल भए तर मर’णासन्न हुनेगरी पि’टिए । सुदीपलाई प्रहरीले उ’द्धार गरी मिसन अस्पताल लगेको थियो । त्यहाँ उनलाई सकसपूर्ण दुई रात बिताउनुप¥यो । घाउ पूरा निको नभए पनि उनी त्रा’सकै कारण घर फर्किनुप¥यो । प्रहरी, सञ्चारकर्मी र अन्य आफन्तले के भएको हो ? कसरी घ’टना भयो ? सोधेर हैरान पारेपछि आफू घर आएको सुदीपको भनाइ छ । बेलाबेला उहाँलाई त्यही नवराज लगायतका साथीहरूले बचाउ बचाउ भनेको आवाज कानमा गुञ्जिरहन्छ ।
‘सुतेका बेलासमेत मलाई न’मा’र्नुस् भन्छ,’ मदनकी आमा लक्ष्मी शाहीले बताइन् । सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लगेर शारीरिक र मानसिक समस्याको उपचार गर्ने सोच भए पनि आर्थिक अभावले कतै लैजान नसकेको उनले बताइन् । घरी पुलिसले बोलाउँछ, घरी युट्युबर लगायत आउँछन्, बोलाउँछन् । ‘थरिथरिका मान्छेलाई कति बयान दिनु ?’ लक्ष्मीले भनिन, ‘अहिले पनि छोरो ड’रा’इ’रहेको छ ।’आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।